I-HTV Vive Focus, izibuko ezintsha ezingenantambo ezingokoqobo ezivela ku-HTC | Izindaba zamagajethi
I-HTV Vive Focus, izibuko ezintsha ezingokoqobo ezivela ku-HTC ngaphandle kwezintambo
Yize ukwethulwa kohlelo lweqiniso lwe-HTC kufika ngemuva kwesikhathi kunele-Oculus, abaningi kube ngabasebenzisi abakwaziyo ukukhetha ngokuhlakanipha futhi bakhetha uhlelo olungokoqobo lwenkampani yaseTaiwan, uhlelo olunikeza ikhwalithi nenkululeko eyengeziwe lapho ifika ukudlala imidlalo, noma kunjalo intengo yayo iphakeme kunaleyo yembangi yayo.
Inkampani yaseTaiwan yethule into entsha engokoqobo ebizwa nge-HTC Vive Focus, uhlelo oluzimele olungenazintambo olungadingi ukufaka umakhalekhukhwini ukuyisebenzisa. Le phrojekthi, eyenziwe ngokubambisana neQualcomm, iyi- maphakathi ne-HTC Vive kanye nezibuko zangempela ze-Samsung.
Kumele kukhunjulwe ukuthi le modeli entsha ayifiki emakethe ukufaka esikhundleni noma ukufaka enye imodeli yeVive, kepha ukuthi le modeli okuqondiswe emkhakheni wezemfundo, ekhombisa intshisekelo efanayo ne-Microsoft ne-Samsung, futhi efuna ngayo ukuba ngenye indlela yokufundisa ezikhungweni zemfundo ukwenza lula ukufunda kwabafundi.
IHTV Vive Focus ibhekiswe emakethe yaseChina, kepha inkampani ihlela ukwethula maduze idivayisi efanayo emakethe yaseMelika neyaseYurophu, okungathi ngokwamanye amahemuhemu kungathiwa yi-Eclipse, igama elingakaqinisekiswa ngokusemthethweni. Njengoba kushiwo inkampani ngesikhathi sesethulo, njengamanje kunabathuthukisi abangaphezu kwekhulu abakha okuqukethwe kwale divayisi entsha.
Ngaphakathi kweHTC Vive Focus siyithola iprosesa yeQualcomm Snapdragon 835 kanye nezibonisi ezimbili ze-AMOLED, okungacaciswanga isinqumo. Ziza nezilawuli ezimbili, ezifana nalezo ezitholakala kumamodeli we-Google's DayDream ne-Samsung Gear VR, ukulawula nokuxhumana nokuqukethwe okukhonjiswa ezibukweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-HTV Vive Focus, izibuko ezintsha ezingokoqobo ezivela ku-HTC ngaphandle kwezintambo
I-YouTube izokuvumela ukuthi uthenge amathikithi emakhonsathi
Imisebenzi yasendlini yibhizinisi lawo wonke umuntu futhi abakwaSamsung bayayikhumbula #YaNoHayExcusas